ဝက်ခြံက ပိုးဝင်နေတာလား.................. - Hello Sayarwon
ဝက်ခြံ လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံး။ အများစုနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ အရေပြားပြဿနာဟုတ်။ မျက်နှာမှာတင်မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်နေရာ တော်တော်များများမှာ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံကပေါက်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ ပျောက်သွားလေ့မရှိသလို အခန့်မသင့်ရင် ပိုးဝင်တတ်ပါတယ်။ ပိုးဝင်တဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲ မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီပြဿနာတွေ ကင်းစေဖို့ ဝက်ခြံပိုးဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားဖို့ လိုမယ် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
Propionibacterium acnes လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားက အရေပြားပေါ်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့က ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် အရေပြားကို ထိခိုက်စေတာမျိုးလုံးဝ မရှိပေမယ့် အဆီဂလင်းတွေမှာ ဆဲလ်သေတွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုကို စတင်ပါတယ်။ ဒီလို ပေါက်ဖွားတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားက တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရာကနေ ရောင်ရမ်းနီရဲတဲ့ ဝက်ခြံတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါတွေက တဖြည်းဖြည်း ရောင်လာပြီး ကြီးသထက် ကြီးလာကြပါတယ်။
ဒီလိုအနေအထားမှာ ဝက်ခြံကို ညှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရေပြားပေါက်ပြဲမှုကနေ ဘက်တီးရီးယားက အရေပြားထဲကို ဝင်သွားပြီး ပိုးဝင်ကူးစက်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ နာကျင်ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ဝက်ခြံရယ် ဝက်ခြံ သက်သာသွားရင်တောင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်၊ အမဲစက်တွေပါ။
ဝက်ခြံ ပိုးဝင်နေလား ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ………
ဝက်ခြံက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သူ့အလိုလို သက်သာသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ဝက်ခြံက
ပုံမှန်ထက် အရွယ်အစား တော်တော်လေးကြီးနေမယ်
ပြည်တွေနဲ့ ပြည့်နေမယ် ဆိုရင် ဝက်ခြံပိုးဝင်နေတာပါ။
နီရဲပြီး အထိမခံနိုင်အောင်နာနေတဲ့ အဖုအကြီးကြီးဖြစ်နေမယ်
နေရတာ မသက်မသာဖြစ်နေမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ…………
ကုသနည်းကတော့ ဝက်ခြံကို ဝင်ရောက်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ပါပဲ။ ဒီတော့ ဝက်ခြံ ပိုးဝင်ကူးစက်တာက အရမ်းမပြင်းထန်ဘူးဆိုရင် နေအိမ်မှာတင် အခုလို ကုသပေးလို့ရပါတယ်။
ရေနွေးဝတ်ကပ်ပါ – ဝက်ခြံဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တဘက်စ သန့်သန့်လေးကို ရေနွေးစိမ်လို့ ရေစင်အောင်ညှစ်ပြီး ခပ်နွေးနွေးအနေအထားမှာ ကပ်ပေးပါ။ ဝက်ခြံကို ဖိညှစ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက ပြည်တွေ၊ အဆီတွေ နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို အရေပြား အပေါ်ယံလွှာထိရောက်လာအောင် ဆွဲယူပေးနိုင်ပါတယ်။
benzoyl peroxide လိမ်းပေးပါ – ဒီလိမ်းဆေးကို ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူမေးမြန်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ဒီဆေးကို သန့်စင်ထားတဲ့ ဝက်ခြံနဲ့ ဝက်ခြံတဝိုက်ကိုတစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် မှန်မှန်လေးလိမ်းပေးပါ။
သန့်စင်အောင် ထားပေးပါ – ဝက်ခြံကို လက်နဲ့မထိပါနဲ့။ ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ ပုံမှန် သန့်စင်ပေးတာက ပိုးဝင်ကူးစက်တာကို သက်သာစေပြီး နောက်ထပ် ပိုးမဝင်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ထားပေးပါ – မျက်နှာပေါ်မှာ မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ် အခြားနေရာတွေမှာ ဝက်ခြံပေါက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ချည်သား ပွပွချောင်ချောင်လေးတွေ ဝတ်ထားပေးပါ။
အဝတ်အစားတွေကို သန့်ရှင်းရေးဂရုစိုက်ပါ – အဝတ်အစားတွေကို ပုံမှန် လဲလှယ်ပေးပါ။
မကုတ်ပါနဲ့ – ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့အခါ ကုတ်ချင် ဖဲ့ချင်စိတ်က အလိုလိုဖြစ်တာပါ။ ညှစ်ပလိုက်ရ၊ ကုတ်လိုက်ရင် အဆံကြီးထွက်လာမှာ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မကုတ်ပါနဲ့။ ဝက်ခြံကို ကုတ်ဖဲ့တာက ပိုးဝင်နိုင်ခြေများလို့ပါ။
မိတ်ကပ် မလိမ်းပါနဲ့ – ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်မလိမ်းပါနဲ့။ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့ပြီး ဝက်ခြံပိုဆိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ………
ဝက်ခြံ ပိုးဝင်ကူးစက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်သန့်စင်ပါ။ ဝက်ခြံဖြစ်လာခဲ့ရင် ကုတ်ဖဲ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အသားအရေကို ပုံမှန် သန့်စင်ပြီး ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့မှုကင်းအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။ အပြင်ကပြန်လာတိုင်း မျက်နှာကို သေချာ သန့်စင်ပါ။
Is my pimple infected? https://www.medicalnewstoday.com/articles/321381 Accessed Date 8 May 2020
Infected Pimple: Is it Infected? https://www.healthline.com/health/skin/infected-pimple Accessed Date 8 May 2020
ချွေးနံ့ပြင်း လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ....... ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား....... အကြောင်းအရင်းကတော့
အခြေခံကျန်းမာရေး, ရောဂါလက္ခဏာများ စက်တင်ဘာ 15, 2021 .2mins read